Maareynta Kiiska Bariatric - Caymiska Caafimaadka Maxalliga ah ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Maaraynta Caafimaadka > Maareynta Kiiska > Maareynta Kiiska Bariatric
Qalliinka bariatric sax ma kuu yahay adiga?
Adiga oo xubin ka ah Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington (CHPW), waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad sahamiso qalliinka bariatric si kor loogu qaado caafimaadkaaga iyo raaxadaada. CHPW waxay leedahay barnaamij 3-waji ah oo kaa caawinaya inaad qiimeyso in qalliinkan adiga kugu habboon yahay iyo in kale.
Xubin kasta oo katirsan CHPW wuxuu codsan karaa inuu kaqeybqaato Barnaamijka Maareynta Kiiska ee Bariatric. Dhammaan xubnaha kaqeyb gala waxaa lagu qori doonaa maaraynta kiiska. Kooxdayada maaraynta kiiskeena waxay ku siin doonaan taageero shaqsiyeed, waxay ka jawaabi doonaan su'aalahaaga, waxayna kaa caawin doonaan inaad isku dubarido daryeelka nidaamkaas.
Marxaladda 1 - Qiimaynta
Markaad weydiiso bixiyahaaga daryeelka aasaasiga ah qalliinka bariiska ama Barnaamijka Maareynta Kiiska ee Bariiska CHPW, waxay sameyn doonaan qiimeyn. Uma baahnid gudbin ama oggolaansho hore si aad u bilowdo Marxaladda 1.
Dhaqtarkaaga ayaa qiimeyn doona:
Xaaladaha caafimaad ee buurnida la xiriira sida dhiig karka, nooca sonkorowga 2, iyo hurdo la'aanta
Haddii aad isku dayday inaad lumiso miisaanka siyaabo kale, laakiin aadan awoodin
Kahor intaadan bilaabin Marxaladda 2, waa inaad heshaa oggolaansho hore laga bilaabo CHPW. Bixiyahaaga ayaa soo gudbin doona codsiga.
Marxaladda 2 - Qiimeyn iyo miisaan lumis
Marxaladda 2 waa lix bilood oo dheer. Waxay leedahay laba qaybood: barnaamijka miisaanka oo yaraada iyo qiimeyn faahfaahsan oo uu bixiyo adeeg bixiye la oggolaaday. Maareeyayaasha kiisaska CHPW ayaa kaa caawin doona sidii aad u diyaarin lahayd daryeelka aad u baahan tahay iyo isku duwidda u dhexeysa bixiyeyaashaada iyo CHPW.
Iyada oo qayb ka ah Marxaladda 2aad, waxaad ka qaybqaadan doontaa barnaamijka miisaanka luminta waxyaabahaas:
Ka dib qorshe miisaan lumis ah iyada oo la kormeerayo bixiye caafimaad oo shati haysta, oo leh miisaan lumis joogto ah ugu yaraan 5% miisaanka jirka
La kulanka daryeel caafimaad bixiye bishiiba mar si dib loogu eego horumarka
La kulanka khabiir ku takhasusay cilmiga cuntada oo la talin ah laba jeer bishiiba ugu yaraan 6 bilood
Haysashada joornaalka kaqeybgalkaaga miisaanka luminta
Waxaad sidoo kale mari doontaa qiimeyn faahfaahsan si loo hubiyo inaadan haysan dhibaatooyin ku saabsan isticmaalka mukhaadaraadka ama jirro maskaxeed oo kaa hor istaagi doonta kaqeybgalka shuruudaha cuntada qalliinka kahor ama isbedelka qaab nololeedka qalliinka kadib.
Qiimeynta waa inay kujirtaa:
Dukumiinti in haddii aad taariikh u leedahay jirro maskaxeed, aad xasilloonayd ugu yaraan 6 bilood
Dukumiinti haddii aad taariikh ku leedahay daroogada iyo ku-xadgudubka khamriga, aad miyir qabtey ugu yaraan hal sano
Qiimeyn daawo gudaha ah si loo qiimeeyo xaaladaada iyo halista caafimaad ee qalliinka
Qiimeyn qalliin oo uu sameynayo dhaqtarka qaliinka sameyn doona
Marxaladda 3 - Qalliinka
Ka dib markaad dhamaysato Marxaladda 2aad, waxaad xaq u yeelan doontaa in lagu sameeyo qalliinka bariatric. Waa inaad heshaa oggolaansho hore laga bilaabo CHPW qalliinka ka hor.
Maamulayaasha kiisaska CHPW ayaa kaa caawin doona inaad jadwal u sameyso qalliinkaaga, waxay ku siin doontaa taageero, waxayna kaa caawin doontaa inaad qorshe u sameyso ka dib marka lagaa saaro.
Ma isweydiineysaa in qalliinka bariatric uu adiga kugu habboon yahay?
Nala soo hadal si aan wax badan uga ogaano Barnaamijka Maareynta Kiiska ee 'Bariatric Program' at 1-866-418-7004.
[emailka waa la ilaaliyay]chpw.org
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Cusboonaysiinta: Julaay 19, 2021